Mba tsy ho sarintsariny… | NewsMada
Mba tsy ho sarintsariny…
Mba tsy ho sarintsariny fotsiny ihany, manomboka eto. Nomarihina tam-pahamendrehana tao anaty valanaretina, mbola mamely sy mihanaka, ny fetim-pirenena. Teny niverimberina ny Fahaleovantena, ny fiandrianam-pirenena, ny hambompo sy ny maha Malagasy… Mitaky andraikitra amintsika tsirairay anefa vao ho feno sy ho tanteraka izany tena fahaleovantena izany. Anisan’izany ny tsy tokony hiankinan-doha amin’ny famokarana eto an-toerana. Ohatra, ny sakafo toy ny vary, mbola hafarana. Ny rafi-pampianarana tokony hifototra amin’ny tantaran’ny firenena sy ny soatovina na ny kolontsaina malagasy fa tsy narafitra na nalaina tahaka amin’ny vahiny. Tokony efa hamboarina sy ampifanarahina amin’ny efa ananantsika eto ny fampitaovana sy ny fanorenana fotodrafitrasa.
Ankoatra izany, mbola iandrasana ny mpamatsy vola ny fampitaovana sy ny hoenti-manana amin’ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Tokony ho vita eny ifotony amin’ny alalan’ny dina sy ny fifampifehezana ary ny fandraisana andraikitra anefa izany. Tahaka izany koa ny fifidianana. Iandrasana ny avy any ivelany izany nefa hifidy ny ho mpitondra isan-tokony hitantana eto amintsika.
Tsy vitan’izany fa manana harena marobe, tsy hita noanoa, isika. Eo aloha ny tanora, anisan’ny harena lehibe ho antsika sady maro anisa amin’ny vahoaka malagasy. Ny fananana velaran-tany midadasika azo trandrahina, miainga amin’ny eo an-tanana. Ny harena an-kibon’ny tany sy ny harena an-dranomasina ankoatra ireo tontolo iainana: biby sy karazan-javamaniry na ala sy hazo sarobidy, mampiavaka antsika.
Ampahany ihany ireo… Koa fotoana izao ahatongavantsika saina hiatrehana ny 60 taona manaraka indray, hialana tsikelikely amin’ny fiankinan-doha amin’ny hafa. Miainga amin’ny eo an-tanana sy manitatra izany. Mba tsy hobaikoin’ny vahiny sy ny hafa intsony isika. Tsy manakana ny fitodihana amin’ny any ivelany anefa izany, saingy anjarantsika ny mametraka ny fiaraha-miasa tiantsika hatao.
Alao hery àry! Tsy mbola tara isika, saingy mitaky asa izany.